Minisitra Faratiana sy i Tinoka Roberto: hatao amin’ny alatsinainy ny famindram-pahefana | NewsMada
Minisitra Faratiana sy i Tinoka Roberto: hatao amin’ny alatsinainy ny famindram-pahefana
Par Taratra sur 26/01/2019
Hotanterahina, ny alatsinainy 28 janoary ho avy izao etsy amin’ny toeran’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena Ambohijatovo, ny fifamindram-pahefana eo amin’ny minisitra vaovao, Raharoarilala Tinoka Roberto, sy ny teo aloha, i Tsihoara Faratiana. Tokony ho natao omaly zoma izany, saingy nahemotra.
Nambaran’ny minisitra Faratiana fa efa vonona avokoa ny antontan-taratasy amin’izany famindrana fahefana izany fa ny fotoana sisa andrasana. Hiatrika asa goavana avy hatrany, amin’io herinandro io, ny minisitra Roberto. Anisan’ny lehibe indrindra ary andrasan’ny rehetra amin’izany,ny fanomanan-tenan’ny Barea de Madagascar, hiatrehana ny “Can 2019”.
Hatreto mantsy, tsy mbola misy ambara ny amin’izany fiomanana izany. Efa eo ny minisitra Roberto izay olona mpankafy baolina koa antenaina fa hisy fandaharana efa voaomana amin’izany. Andrasan’ny mpankafy ihany koa ny hisian’ny fihaonana firahalahiana hatrehin’ny Barea, mialoha ny hifandonana amin’i Sénégal, eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona farany, ary koa lalao fitsapana hafa, mialoha ny tena handehanana any Egypta.
Ankoatra izay, eo koa ny amin’ny “Lalaon’ny Nosy”, hatao atsy Maorisy, ny amin’ny fampivondronana ireo atleta hiatrika izany. Manginy fotsiny ny famahana ireo olana eo amin’ireo federasiona sasantsasany.